Ukuzilibazisa & Ukuhamba - iSearch
NgoMgqibelo, ngoMeyi 30, 2020
Njengomsebenzi phakathi nohambo, sinikeza ukuthi "Ngiyabona ukuthi awuboni" nezingoma ezivamile, ngisho nemidlalo yomsakazo noma ama-movie ku-DVD player yeselula. Kodwa-ke, uma kunokwenzeka kuphela ngokuphuthumayo - noma nge-headphones: KwaBenjamin Blümchen engxenyeni engapheli akuyona ithenda (umzali) wezinzwa.
Ekugcineni yisikhathi esivamile seholide. Ukuze uphume ekuphileni kwansuku zonke futhi uvuselele amabhethri akho akubalulekile kuphela kubantu abadala. Izingane nazo zidinga ikhefu kusuka enkulisa nasezikoleni. Ngokuvamile akulula ukuvumelanisa zonke izithakazelo futhi uthole indawo yokuvakasha ehlinzeka wonke amalungu omndeni izinga lakhe lokuzilibazisa kanye nomsebenzi. Kodwa ngokuhlela kancane, zonke izinsuku zomndeni ziba yisikhathi esihle kakhulu sonyaka.
Ukukhetha izindlela ezifanele zokuthutha
Phezu kwesigaba sesinqumo kufanele kube umbuzo wezindlela ezifanele zokuthutha. Imoto inezinzuzo ezingenakulinganiswa zokukwazi ukuhamba ngemithwalo eminingi futhi ukuguquguquka ngokwesikhathi. Lokhu kubaluleke kakhulu lapho uhamba nezingane ezincane. Kumele uhlele isikhathi esiningi nendawo eziningi zokuphumula - mhlawumbe ezindaweni eziningi zokuphumula, ezinendawo yokudlala. Lokhu kudala ibhalansi enhle yokuhlala isikhathi eside. Ngendlela, abazali abaningi banquma ukuya eholidini ebusuku ngoba banethemba lokuhamba ngokukhululekile. Kodwa-ke, ikakhulukazi emabangeni amade, kufanele ucabange ngokucophelela ukuthi unesiyalo esidingekayo ukuze ufune ukulala ngokwanele ngaphambi kokuba uhambe. Phela, izingane ezijabule ngokuvamile zilukhuni ukulala ebusuku futhi labo abamatasa ngokupakisha kuze kube sekugcineni akufanelekile ukuhamba ebusuku! Ngakho-ke, kufanele uqale ukulala kahle ekuseni bese ululame eholidini.
Enye indlela yokuhamba ngomndeni i-Deutsche Bahn. Njengoba izitimela ze-ICE zinezingane ezincane ezinezikhala ezanele zokudlala, zilungile ekuhambeni komndeni. Umbono ovela efasiteleni, ukuvakashelwa emotweni yokudlela noma amathoyizi alethwe nalo inikeza okuhlukahlukene okwanele ukwenza uhambo nengane kusukela ekuqaleni ukuphumula. Kuyoba nje ukukhathala uma kudingeka ushintshe izikhathi eziningana. Ngakho-ke, kunconywa ukutadisha uhlelo oluqondile lokuhamba ngaphambi kokubhuka!
Uma unquma ngokumelene nezindiza, kufanele uqiniseke ukuthi ingane iphilile ngaphambi kokuba uhambe. Indiza ene-throat, impumulo noma indlebe ukutheleleka ingaba buhlungu kakhulu. Ukubuyisela ukuguquguquka kwengcindezi ngesikhathi sokukhuphuka noma ukwehla, izipucu zomzimba zisiza ukuphuma nokuhlala. Kodwa futhi ama-earplugs amasha alinganisa ukucindezela, ukulungisa. Ngakolunye uhlangothi, izinsana ziwusizo oluwusizo kakhulu kubadlali be-pacifiers noma ama-pacifiers. Uma lesi siphepho sithathwa, ukuhamba emoyeni kuzithembisa ukuba nakho okuthakazelisayo nokujabulisayo, ikakhulukazi ezincane. Ngenxa yokuhamba okulinganiselwe kwe-motion, isikhathi esiphezulu sezindiza cishe amahora amathathu sinconywa izinsana.
Yini okufanele uyenze uma kwenzeka uhambo?
Ikakhulukazi lapho kuhamba khona imoto ende, ukugula okuhamba phambili kuvame ukungena, ikakhulukazi ezinganeni ezindala. Ukuze ugweme lokhu, amabhuku namageyimu wekhompuyutha kufanele agwenywe ngenkathi ushayela. Njengendlela yokwelashwa okusheshayo nephumelelayo ye-annoying travel-bubble gum isiqinisekisile. Ukwengeza, amabhande ase-acupressure asanda kutholakala. Aziqukethe izithako ezisebenzayo bese usebenza kuphela ngokusebenzisa ukucindezela kokukhanya kwamaphuzu athile okushaya i-acupressure. Lokhu kwenza ukuba bafanele ngisho nezingane ezincane.
Indawo engcono kakhulu yeholide emindenini enezingane
Kungakhathaliseki ukuthi ulwandle nolwandle, izintaba noma ipulazi - ekukhethweni kokuya kufanele uhlanganise nabantwana bakho ngokuthula. Ikakhulukazi iholidi lemvelo ngokuvamile lizimele, ngoba izingane zingakwazi ukuhlukumeza lapho okuqukethwe kwenhliziyo yabo futhi zihlole izindawo ezizungezile. Kodwa hhayi wonke umuntu, iholidi ngaphandle kokuphila noma ukuthanda amasiko ukujabulela. Khona-ke kungcono ukuthola ukulingana. Amaholidi ehoreni lomndeni angaba inketho efanele kulokhu. Linikeza amathuba ahlukahlukene emisebenzi kubantwana, kuyilapho abazali benesikhathi sokuzikhethela. Ukuvakasha okuhlangene bese kuba nakho komndeni. Labo abafuna inkululeko eyengeziwe nokuzimela ngaphandle kwezikhathi zokudla ezihleliwe zeholidi labo kufanele bacabangele ukuhlala ekhaya leholide. Ngisho nezinkampanini zinikeza namuhla induduzo futhi ngaphezu kwetende namakhaya asekhaya ngokuvamile futhi anezindlu zokuhlala.
Amaholide aphumelelayo awudingi ukuhamba kude. Imoya enkulu yeholidini ingavela futhi epaki eliphakathi noma epaki yeholide eduze kakhulu. Futhi futhi ukuhamba ngosuku ngezindawo zezilwane noma zokungcebeleka kwenza isikhathi seholide sibe nesipiliyoni. Ngokuvamile, uma izingane zijabule futhi zimatasa, iholide libuye libe ngabazali ngokuzilibazisa!
Thola ukuthi yiliphi iholide elikufanele wena nomndeni wakho! Umhlahlandlela wethu ukunikeza amathiphu awusizo kwenkathi yamaholide engakhathazeki!